Ekwuputara March 3 nke ụwa - The World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Ekwuputara ụbọchị atọ nke ụwa
18 / 10 / 2020 04 / 10 / 2020 site Antonio Gancedo
A mara ọkwa 3rd World March maka 2024 na Forum for Nonviolence na Mar del Plata - Argentina
Na ememe nke Iri afọ 10 nke Izu maka enweghị ike na Mar del Plata chụpụrụ Osvaldo Bocero y Karina Freira ebe ndị ndọrọndọrọ si mba iri abụọ America, Europe y Afrika.
Ebe ahụ Rafael de la Rubia mara ọkwa na site na Madrid na na 2024 ihe 3M World March maka Udo na Nnochi.
El Nzukọ na Nonviolence Ọ malitere site na obere ememe na mmụọ nke arịrịọ maka udo ụwa n'asụsụ atọ: español, Portuguese y guarani. Ọ bụ obere oge ntụgharị uche na njikọ dị n'etiti ndị sonyere.
Osvaldo gosipụtara rụzuru na ọganihu nke ihe malitere dị ka a Izu maka enweghị ike n'ime usoro nke 1M World March na 2009 na otu o siri nwee ọganihu n’ime afọ iri ndị a. E gosipụtara ihe nlele dị mkpirikpi site na foto nke njem ahụ.
Anyị mụta nwa ụfọdụ ndị amụma na Rafael de la Rubia, ọnụ na-ekwuru ndị March March, kwuru n'okwu ya:
"Bụ Izu Na-enweghị Ọgụgụ Ọ bụ ihe atụ nke ịdịgide adịgide ruo afọ 10, nke na-arụ ọrụ dị ka mmụọ nsọ. Ọ bụ ọrụ a kwadoro na nke a, nke na-egosi anyị ụzọ na ọganihu.
N'ụbọchị a, anyị chọrọ ịga na okwu ahụ na-enweghị nsogbu
Ná mmalite February 2016, na Nzukọ nke Peña Blanca (Honduras), mkpakọrịta mmadụ MSGySV malitere mkpọsa maka itinye okwu nonviolence na akwụkwọ ọkọwa okwu nke Umu akwukwo nke asusu Spanish.
Ọ bụ gbasara ịgbatị ihe a gaa n'asụsụ ndị ọzọ na-enweghị okwu ahụ. Enweghị nsogbu na Russian n'ihi na, na Czech ọ bụ nenásilí, na German gewaltlosigkeit, na italian nonviolenza na Bekee ezighi ezi, ma na Spanish ọ dịghị adị.
Maka okwu iji tinye na akwụkwọ ọkọwa okwu nke asụsụ Spanish, a ga-ede ya na ejiri ya eme ihe, nke a bụ otu esi etinye ya n'ọrụ. Ya mere, ọ bụ ndị ọrụ na-elekọta mmadụ ka ha rụọ ọrụ ka e wee jiri ya mee ihe n'ozuzu ya ma mekwa ka ihe ọ pụtara jupụta ebe niile a na-asụ Spanish.
Anyị na-erite uru Nonbọchị Ọgba aghara iji kpọọ ya ka e jiri ya dịka otu mkpụrụ okwu, ma na-enweghị mgbochi, ma si otu a anyị nwere ike ị nweta okwu a na-eme n'asụsụ Spanish. Ka anyi jikota iji gosiputa ojiji ya, ya na ya, inye ndi mmadu ihe omuma maka oge ohuru ohuru.
Ememme Nkiri Na-enweghị Ntị: Taa malitere emume International nke ụbọchị atọ nke a kwalitere FICNOVA.
Oké Osimiri Udo nke Mediterenian: Mgbasa ozi malitere na 2M World March na-ezube iji tọghata ndị Mediterranean na oké osimiri nke udo, nzukọ nke ọdịbendị na enweghị ngwá agha nuklia.
- Akwụkwọ osise nke Editọ Saure. 100 peeji. Ọ ga-apụ n'izu ole na ole. N’asụsụ Castilian na Basque. A na-atụ anya mbipụta n'asụsụ ndị ọzọ.
- Akwụkwọ nke Isi nke Nobel Peace chọr'inwe: Ajuju MSGySV dee isi na nonviolence. Anyị ga-ebufe ya na Disemba nke afọ a.
-Akwụkwọ nke 2 MM. Anyị na ọdịnaya na nzukọ. Ozi ka na-efu na ụfọdụ ebe.
Anyị na-eche echiche ichere obere oge wee wepụta ya mgbe TPAN. N'okwu ahụ, anyị ga-etinye otu isi okwu na isiokwu ahụ.
- A na-arụ ọrụ na ime Ememe nke ụmụ amaala ụwa cyberactivism na isiokwu nke TPAN iji mee ememe ịbanye na ike mgbe m na-akpọsa ya United Nations. Anyị na-agbakọ maka mmalite nke 2021.
- Anyị ga-ekere òkè na Machị maka Udo Perugia - Assisi nke na-esote Ọktọba 10.
- Nzukọ Mba Nile: Na Gin na njedebe nke October, Isi nke Nobel Peace chọr'inwe akpọwo MSGySV etinye ọnụ na nzukọ 4 mba ọzọ, nke mere na ndị na-eto eto sitere na otu ndị a na-eweta atụmatụ ha, ọrụ na omume ha.
- Nzukọ Mpaghara maka Udo na Latin America na March nke 2021 chụpụrụ site Onyinye Nobel nke Udo site na nkwado nke obodo nke Merida-Mexico na mahadum 9 dị na mpaghara ahụ Maya. A kpọkwara ahụ anyị MSGySV.
-3rd World March
- Anyị na-ekwupụta ọkwa nke a 3ª MM ga-amalite n’Ọktọba 2, 2024
-Dị ka na 2ª MM ọ ga-ebido ma kwụsịkwa n’otu obodo ahụ mgbe ọ gafesịrị ụwa okirikiri.
-Ọ ga - etinye njegharị mpaghara dịka: South America March, Central America March, March maka Oké Osimiri Mediterenian nke Udo y Latin American March. Anyị nwere olile anya na ndị ọzọ ga-esonye. Olileanya anyị nwere njegharị na njirimara n'ofe kọntinent.
-Ọ ga - etinye usoro ihe eji eme njem nlegharị anya, iji nye ndị nwere mmasị ohere kachasị ukwuu.
Kalenda nke 3 World March
Na 21/6/2021, a ga-amata ntọala maka obodo iji tinye maka 3 MM 2024.
- Obodo ndị na-aga ime obodo ga-eziga ngwa ha na 21/6/2022.
-2/10/2022 ga-ekwuputa ebe 3rd MM ga-amalite / kwụsị.
-2/10/2024 mmalite nke 3 World March.
Site na Otu MSGySV Global Coordination Team Agwara m na na Ọktọba a ka a ga-eme ọnụọgụ ọnụọgụ ọhụrụ na mgbe a ga-eme ntuli aka maka ndị otu nhazi ụwa ọhụrụ. Anyị na-akpọku gị ka ị sonyere ma sonyere Ụwa na-enweghị agha na ime ihe ike.
Onweghị ihe ọzọ, daalụ nke ukwuu…
Anyị na-ekele Liz Vasquez maka nsụgharị Bekee nke isiokwu a.